Faallo: Meles Zenawi kadib Ethiopia maxay noqon doontaa? | Warfaafiye
Warfaafiye Qormooyinka	Faallo: Meles Zenawi kadib Ethiopia maxay noqon doontaa?
Sep 4th, 2012 – by admin0
Ethiopia waxaa soo maray nidaam darran ee habka dhul goosadka ah iyada oo ayna ku tixnayd taariikh iyo isbadalo Imbaratooriyaad saameyn ku yeeshay dagaalo is fidin dhuleed iyo isbalaarin dhanka awoodaha. Nidaamkaasi wuxuu xiriir qoto-dheer la lahaan jiray duni gaababay ee jiri jiray qarniyaal tagay.
Imbaradooriyinkii Ethiopia soo maray waxay ahaan jireen kuwo ka kooban habab ku saleysan diinta Masiixiyada Qibdiga ah iyo awoodo boqortooyooyin isku qafoolon , si la mid ah sida aan hadda loo kala saari karin dalkaSacuudiga nidaamka Boqortooyada iyo Islaannimada firqada Wahaabiyanimada ku saleysan.
Labadan Boqortooyo, inkastoo qaniimada Bartroolka daraateed Sacuudiga uu gayensiiyay inuu ku dhex noolaado duni casri ah, kana duwan midda Ethiopia, ayaa haddana, waxay ku caan baxeen marka la isbarbardhigo iyada iyo tii hore ee Abyssinia, qaabka is-fidinta xoog u adeegsiga ku dhisan, oo labadaba midna juqoraafi ahaan isku ballaarisay Geeska Afrika, midka kalena Jaziirada Carabta.
Boqortoyadii hore ee Abysiinia ilaa tii Empror Haile Salassie waxaa cadaawad taariikhi ah kala dhaxaysay qoomiyaadkeeda gudaha ka sakow, dalalka deriska ah, sida Somalia, Sudan iyo Egypt.
Meles Zenawi wuxuu kasoo jeedaa Qowmiyada Tigreega ee ku magaca leh xadaaradda Aksiyoom (Axum) oo ah mid ku abtirsata ka imbaradooriyad ahaan taariikhaha ugu faca weyn ee Qaarada Afrika.
Dhicitaankii nidaamkii shuuciyadda ee bariga Yurub iyo qaybo kale ee dunida ka mid ah iyo isbadalkii Soofiyeetka kala daadiyay wuxuu horseeday in dagaalkii qaboobaa dhamaadkiisa uu saameyn ku yeeshay inuu isbadal ku yimaado xukunkii Mengistu Haile Mariam.
Isbaheysigii Jabhadihii Tigreega ee “TPLF” iyo tii Eritrea ee “EPLF ayaa waxay halgan muddo dheer kadib soo gabagabeyeen Ethiopia inay ka xarowdo awoodii shuuciyadii iyo Militari ee uu hoggaamin jiray Mengistu Haile Mariam,halka ka hor halgankii WSLF ay ku wiiqantay heshiiskii Siyaad Barre uu la galay 1987 Mengistu Haile Mariam.
Meles Zenawi qabsashada awoodda Ethiopia kadib, wuxuu ku guuleystay inuu isku keeno dhamaan wakiilo ka kala socday iyagoo matalaaya ururadii iyo jabhadaadkii Qowmiyadaha kuna kacsanaa Kaligii taliyihii naxariista darnaa Mengistu Haile Mariam, waxayna isla dhiseen awoodii EPDRF ” Ethiopian People’s Democratic Revolutionary Front” iyo in lagu wada heshiiyo nidaamka siyaasadeed ee Federalismka si xal loogu dhigayo mashaakilka umadaha ee taariikhiga ah. Qoomiyad walba waxay ugu noolaanaysaa deegaankeeda iyagoo leh awood maamul ee maxali ah, kana mid ah dalweynaha Ethiopia.
Meles Zenawi wuxuu xukunka u qabtay nidaamkii ugu casrisanaa ee taariikhda Ethiopia soo marta, hadane dhanka kale lagu tiriyaa inay soo martay nidaam ku dhisan mid ka mid ah tacadiyada ugu xun iyo meel ka dhaca loo geysto xaquuqda ummadaha iyo caburinta muwaadiniinta ku howlan dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee matala ururada ka jira dalkaas.
Labadii doorasho ee ugu dambeeyay Axsaabtii mucaaradka ayaa ka guuleysteen Meles Zenawi iyo xisbigiisa xaakimka ah ee PRDF, kuwaasoo ay dhaceen sannadihii 2005 iyo 2010. Laakin inuu weli xukunka ku sii dhegganaado sida madaxa Africkaanka lagu yaqaan wuxuu u isticmaalay xoog, cago jugleyn, musumaasuq iyo isku haleyn taageerada danaha Beesha Calamka marka laga hadlaayo la dagaalanka Argagixasada caalamiga ah, gaar ahaan, midda ka soo qamqameysa qurunkeeda dhinaca Soomaaliya.
Xukunkiisa wuxuu isugu jiray horumar iyo dib u dhac intaba, hase ahaatee waxaan haddana noqotay inaan laga samri karin xannuunkii saameynta badan ku yeeshay qeybaha kala duwan ee dhaqdhaqaaqyada mucaaradka, xasuuqii uu u geystay qoomiyadaha qaarkood oo ay ka mid tahay midda deegaanka Soomaalida iyo Jamhuuriyadda Somalia intaba.
Ethiopia waxaa ka sameysmay 21-kii sano maamul kaliye talisnimo xoog ku dhisan, kana baxsan ictiraafka nidaamka dowliga ah, Dimoqraadiyada, kala soocida awoodaha siyaasadeed, heshiisyadii iyo xuquuqda qowmiyaadka iyo qeybsiga qeyraadka wadanka.
Meles iyo Soomaaliya
Mudadii halganka Jabhaddiisa ku jirtay wuxuu in badan Meles Zenawi imaan jiray, joogi jiray, kuna soo noqnoqn jiray Soomaaliya, gaar ahaan magaalo madaxda Muqdisho, isagoo halkaasi ka waday wada shaqeynta iyo xiriirka dhow ee Jabhadiisa la laheyd Dowladdii Soomaaliyeed ee waqtigaas jirtay, taasoo dhinacyo badan markii laga fiiriyo u aheyd fursad muhiim ah.
Wuxuu ka heli jiray dhaqaale xoog badan, saanad, hub iyo xasaaniyad dibloomaasiyadeed iyo mid siyaasaadeed (Diplomatic and Political immunity) oo ahayd aqoonsi loo fidiyay asaga iyo xubnaha muhiimka ka ah jabhaddiisa.
Guushii uu ka gaaray halgankiisa sannadkii 1991 waxaa abaal taariikheed ku leh shacbiga Soomaaliyeed oo si hufan ugu faa’iideystay kaalmada ay u fidiyeen halgankii uu ku jiray, laguna afgemibiyay nidaamkii Mengistu Haile Mariam.
Muxuuse Ku Abaal Guday?
Ciidamada Ethiopia ee soo galay Somalia
Dhicitaankii Mengistu Haile Mariam waxay ku soo beegantay xili Soomaaliya ay sii burbureysay, meesha ay ka baxday awoodii Dowlad Dhexe, dagaalo sokeeyena ay socdaan.
Tan iyo Meles Zenawi imaatinkiisa xukunka ilaa geeridiisa (1991-2012) wuxuu si xun oo sal iyo baarba ah ugu faa’iideystay xaaladdii Soomaaliya ka jirtay oo ilaa iyo haddana aan dhammaan, sida:-
-kaalmooyinka caalamiga ee Soomaaliya heli jirtay, loona weeciyay wadamada deriska.
-Kaalmooyinka loo fidiyo Qaxootiga faraha badan ee kusoo yaacay Ethiopia iyo Kenya.
-Lacagta adag ee biilalka loo soo xawilo qaxootiga Soomaaliyeed waxaa qayb ka mid ah saamiyada ugu badan gashaa Ethiopia iyo sidoo kale Kenya.
-Fara gelin siyaasadeed oo saameyn khatar ah ku leh madaxbannaanida iyo amniga qarameed iyo Soomaaliya uu isticmaalo sida goob qashin oo kale, hubkana lagu daadiyo ayna ka mid tahay miinooyinka si aragaxisada uga faa’ideystaan iyo Istraatiijyadada Ethiopia oo ku dhisan in ay u sii socoto gumaadka iyo burburka.
-Abuuritaanka qabqablayaal dagaal, maamul goboleedyo iyo kala qeybinta dalka, sida Federaalka lagu saleynayo dastuurka Soomaaliya.
-Wuxuu dalka ka dhex sameystay canaasiir qaadumiin u ah iyo ciidankiisa oo si qaawan uga qeyb noqdeen colaadaha.
2006-2009 waxaan taariikhda Soomaaliyeed marnaba ka tirtirmi karin xasuuqii uu ka geystay gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliyeed, gaar ahaan magaalo madaxdeeda – – Muqdisho iyo gobolada bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya.
Kuw loo sameeyay inay horjoogayaal u noqdaan maamul beeleedyo lagu hagal daacinaayo Somalia inay hesho amni iyo midnimo qaran ayaa weli dul taagan qabriga Meles Zenawi iyaga oo weli samri la’ lana miyir la’ baroor diiq.
Meles kadib, Ethiopia….?
Qarniyaal badan kadib,Ethiopia hadda ayay rajo fiican iyo daruuro caafimaad leh soo dul istaagtay, waa haddii madaxda cusub aysan qasaarin fursadahaan qaaliga ah, lana yimaadaan rajo cusub, nidaam caddaalad ah, dimoqraadiyad iyo oggolaasho xuquuqda ummadaha iyo muwaadiniyiinta iyo in xiriir fiican ee dhanka amaanka, iskaashiga iyo isdhexmarka lala sameysto dalalka deriska ah sida Somalia oo kale waxay noqon doontaa taariikh iyo horumar cusub.
Somalia waxaa ka hartay saddax faragelin oo aad loo karaho, mid tii Xusni Mubaarakii Masar, tii Mucamar El-Qadaafi iyo midda hadda ugu dambeysa ee Meles Zenawi. labadaas ka qatarsan, ka xanuun badan kana qurun badan.